स्वास्थ्यका लागि करेलाको जुसका फाइदाहरू ! | सुदुरपश्चिम खबर
स्वास्थ्यका लागि करेलाको जुसका फाइदाहरू !
करेला फाइबरयुक्त हुने भएकाले हाम्रो पेटलाई भरेर राख्न वा पाचन प्रक्रियालाई चुस्तदुस्त राख्न पनि यसले सहयोग गर्छ । एउटा अध्ययनअनुसार यसले मोटोपना कम गर्न पनि सहयोग गर्छ । यो त करेलाको कुरा भयो । त्यस्तै राम्रो हुन्छ, करेलाको जुस पनि । यी हुन्छन् यसका फाइदाः
तौल घटाउन मद्दत गर्छ करेलाःकरेलाको जुसले इन्सुलिनलाई सक्रिय बनाउँछ । यसले शरीररमा बनाउने चिनी तथा बोसो कम गराउँछ । यसले शरीरको बोसो कम गर्न सहयोग गर्छ । करेलामा हुन्छ कम क्यालोरीःकरेलामा क्यालोरी, बोसो तथा कार्बोहाइड्रेट्सको मात्रा कम हुन्छ । एक सय ग्राम करेलामा जम्मा ३४ क्यालोरीमात्र हुन्छ । त्यसैले करेलाको जुसले क्यालोरी मेन्टन गर्न मात्र होइन, बोसोमाथि नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
फाइबरयुक्त हुन्छ करेलाःकरेलामा फाइबरको मात्रा अत्यन्त बढी हुन्छ । करेलामा पानीको मात्र पनि धेरै नै हुन्छ । करेलाको तौलमध्ये ८९ प्रतिशत तौल पानी हो भनिन्छ । त्यसैले पनि गर्मी याममा करेलालाई अझ विशेष मानिन्छ । बोसोयुक्त कोष बन्नबाट रोक्छःएक अध्ययनका अनुसार करेलाले शरिरमा बोसोको मात्र कम गर्न सहयोग गर्छ । यसले शरीरमा नयाँ बोसोयुक्त कोष नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्छ । यसले हाम्रो तौल घटाउन सहयोग गर्छ ।
यदी तपाई स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउन सुरु गर्नुहोस्।यसले तपाईको ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, उर्जामा सुधार,...
आमा बन्नु हरेक महिलाको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । गर्भावस्थामा महिलाले आफ्नो शरीरको एकदमै ख्याल राख्नुपर्दछ । महिलाको मात्र लागि नभई पेटमा भएको...
बैतडी– बैतडीका ८ ओटा स्थानिय तहहरु कोरोनाका शुन्य संक्रिय संक्रमीत पालीका भएका छन । संक्रमण पुष्टि भएका सबै जना निको भएर डिस्चार्ज भए पछि...
अनुहारमा कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना किन आउँछ ? उपचार...
प्रश्न ः म २६ वर्षको छु। मेरो अनुहारमा कनिका जस्तो देखिने सेतो, पहेंलो रङको कडा बल जस्तो दाना आएको छ। यस्तो किन आउँछ? उपचार...
काठमाडौं – बेसाार स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो तरकालीमा हाल्दा तरकालीको स्वाद र रङमा मिठो पना...
सुदुर पशिम खबर माघ ५ काठमाडौँ । कालो र मुलायम कपाल सुन्दरताको प्रतिक हो । मानिसको शरिरलाई जस्तै कपाललाई पनि पोषण तत्वको आवश्यकता पर्ने हुनाले...
हामीले स्वस्थ्य रहनका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । शरीरलाई आवश्यक क्यालोरि मिलाएर खाएको खण्डमा अनेक खालको रोगका समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ...
८ घण्टाभन्दा कम सुत्नुहुन्छ रु हुनसक्छ यस्तो खतरा
एजेन्सी( दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा ९डिप्रेसन०को समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको विघम्टन...